Soo dejisan TeamSpeak 3.0.19.4 Client iyo 3.0.13.5... – Vessoft
Soo dejisan TeamSpeak
TeamSpeak – software caan ah ee isgaadhsiinta cod u dhexeeya dadka isticmaala internet-ka. Softwatr wuxuu kuu ogol yahay in la abuuro aad server u gaar ah oo ay bixiyaan dadka isticmaala leh mudnaanta Moderator oo cayrin kara, martigelin ama mamnuuco in channel ah. TeamSpeak taageertaa codka ama farsamo amarrada hawlgelinta makarafoonka, waxaa ka mid ah dhisay-in chat oo kuu ogolaanaya in aad soo dirto faylasha in dadka isticmaala. Software waxa kale oo uu kuu ogolaanayaa inaad xirmaan waxaa dheer ee Overwolf fursado dheeraad shaqaysa.
Isgaarsiinta cod tayo-sare
Abuurista iyo saldhigyo aad server u gaar ah
Diritaanka faylasha iyo dhisay-in chat
Ku xiridda waxaa dheer ee Overwolf
Comments on TeamSpeak:
TeamSpeak Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... ooVoo 3.6.9.10
العربية, English, Français, Español... i-FunBox 3.0.3109.1352
English, Français, Deutsch, 中文... KaraFun Player 2.3